Ngwa 5 kacha mma nke ọnwa maka gam akporo | Androidsis
Ịmara usoro ọnwa bụ, maka ọtụtụ, ihe ngosi nke ụfọdụ ihe omume. Dịka ọmụmaatụ, dabere na usoro ọnwa na-adaba n'otu oge, mmiri nwere ike imetụta. Maka ụfọdụ anụmanụ, dị ka nnụnụ, ha na-emetụta oge njem, ebe ha na-emetụtakwa sap osisi. E nwekwara nkwenye na usoro ọnwa na-emetụta àgwà mmadụ. N'otu oge ahụ, e nwere ndị kwenyere na n'ọkwa ime mmụọ na n'ihe gbasara ume ha nwere ike ịbụ ihe na-emetụta nnukwu mmetụta.
Ọ dị mma maka ihe ọ bụla, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata ihe niile gbasara usoro ọnwa nke oge a, anyị na-ahapụrụ gị ndepụta na ngwa 5 kacha mma nke ọnwa maka gam akporo. Ha niile bụ n'efu ma dị na Ụlọ Ahịa Google Play. N'aka nke ya, ha bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ebudatara, bụrụkwa ndị nwere ọkwa na aha kacha mma na ụlọ ahịa ahụ.
N'okpuru, ị ga-ahụ usoro nke kacha mma ọnwa na-adọ ngwa maka gam akporo smartphones. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama, dị ka anyị na-eme mgbe niile, na ndị niile ị ga-ahụ na mkpokọta akwụkwọ a bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ụdị ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile.
1 Oge ọnwa m: kalenda ọnwa na usoro ọnwa
3 ọnwa daff
4 Kalenda Oge Ọnwa
5 Usoro ọnwa: kalenda ọnwa eklips
Oge ọnwa m: kalenda ọnwa na usoro ọnwa
Iji nweta nchịkọta a ka ọ bụrụ mmalite dị mma, anyị nwere My Moon Phase, ngwa kalenda na-eme ka ị mata ihe niile gbasara usoro ọnwa dị ugbu a na nke ga-eme ma emechaa. Na a pụtara mfe, bara uru na mfe nghọta interface, ọ na-egosi na-amị n'ọnwa okirikiri nke ụbọchị ọ bụla na kalenda, si otú na-enyere aka ịhazi ihe omume na ọrụ dabere na-abịa ọnwa n'ụzọ. Naanị pịgharịa gaa na akara ụbọchị ma ọ bụ site na ịpị bọtịnụ kalenda ka ịchọta usoro ọnwa.
Dị ka usoro ọnwa nwere ike gbanwee ntakịrị ma ọ bụ nke ọma dabere na ọnọdụ mpaghara, ngwa ahụ na-enye gị ohere ịhazigharị ebe ahụ, ma ọ bụ aka gị ma ọ bụ na-akpaghị aka. O nwekwara ọrụ nke na-eme ka o kwe omume ịmata ka igwe ojii ga-esi dị; Nke a na-enyere aka ịmata ma a pụrụ ịhụ ọnwa ma ọ bụ na ọ bụghị n'oge ụfọdụ. Na mgbakwunye, ọ na-enye gị ohere ịmara mgbe a ga-enwe ọnwa zuru oke, ọnwa ọhụrụ, nkeji mbụ na nkeji ikpeazụ.
N'aka nke ọzọ, My Moon Phase nwere ngalaba nke na-egosi oge elekere ọla edo na oge elekere na-acha anụnụ anụnụ, yabụ ị mara mgbe kacha mma ịse foto. Ihe ọzọ bụ na ọ na-akọ banyere data dị mkpa, dị ka elu nke otu isi ihe na otu ụbọchị, anya nke oge n'etiti ọnwa na ụwa na afọ nke ọnwa. Enwekwara amamọkwa dịnụ nke ị nwere ike ịnata mgbe ọnwa nọ na ngalaba nke nhọrọ gị.
Oge ọnwa m
Ngwa kalenda ọzọ magburu onwe ya iji mara usoro ọnwa, n'enweghị mgbagha. Na usoro ọnwa, kedu ka ọ ga-esi bụrụ ma ọ bụghị, ọ ga-ekwe omume ịmara usoro ọnwa dị ugbu a na ndị na-esote. Site na interface nke enwere ọnwa na-anọchi anya ya na 3D nke enwere ike ịdọrọ ma jiri mkpịsị aka gị tụgharịa, ọ ga-ekwe omume inwe oke nkenke gbasara etu ọnwa si ele anya ugbu a, ekele ịme anwansị nke elu ọnwa nke NASA kere, nke a na-akpọ "ọrụ nyocha nke ọnwa." A na-emelite onyonyo nke ọnwa egosipụtara na ozugbo, ọ dị mma ịmara.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ọkwa nke usoro ọnwa ngwa ngwa na-enweghị ịnweta ngwa ahụ, ịnwere ike iji wijetị ọ na-eweta. Enwekwara ọkwa na ọkwa gbasara usoro ọnwa, yana ihe ncheta gbasara mmemme ọnwa nke ị nwere ike hazie ma hazie dịka masịrị gị. Na mgbakwunye, na kalenda ị nwere ike ọ bụghị naanị ịhụ usoro ọnwa dị ugbu a ma ọ bụ n'ọdịnihu, kamakwa nke oge gara aga, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Developer: M2 Catalyst, LLC.
N'ịga n'ihu ikwu maka ngwa usoro ọnwa nke atọ, anyị na-ahụ Daff Luna, ngwa ọzọ nke, na mgbakwunye na igosi. usoro ọnwa nke oge na ụbọchị ọdịnihu site na kalenda bara uru, Ọ bụkwa ike nke na-egosi ndị ọzọ data dị ka afọ nke ọnwa, ịrị elu na mwube nke ọnwa, n'ụzọ, zodiac, elu na amị n'ọnwa Azimuth, Sun, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn na mbara ala ndị ọzọ. nke usoro mbara igwe.
O nwekwara njirimara nke igosi ogologo nke ụbọchị, Equinox, solstice na ọnọdụ nke ọnwa mgbe niile. N'aka nke ya, ọ na-abịa na 6 dị iche iche wijetị chọta ebe ọ bụla na isi ihuenyo nke Android mobile; Ndị a na-egosi data dabara gbasara ngwa na usoro ọnwa. Maka ndị ọzọ, Daff Luna na-abịa na ncheta na ngosi gbasara usoro ọnwa, ọwụwa anyanwụ, ọnwa zuru oke na ihe omume ndị ọzọ nke mmasị. Ọzọkwa, na ihe karịrị otu nde nbudata na Google Play Store, ngwa a nwere aha kpakpando 1 na-enweghị atụ na ịdị arọ dị naanị 4.9MB.
Developer: Yevgeny Fedorishenko
Kalenda Oge Ọnwa
Na-erube isi na isi ihe, Kalenda Oge Ọnwa bụ ngwa kalenda ọnwa na-anakọta ma kọwaa usoro ọnwa nke ọnwa, ka ị wee mara mgbe ọ bụ ọnwa ọhụrụ, nkeji iri na ise, ọnwa zuru oke ma ọ bụ nkeji ikpeazụ. Otú ọ dị, ọ na-akọkwa banyere anyanwụ, ọwụwa anyanwụ, ọdịda anyanwụ, na ihe ndị dị mkpa ìhè.
N'aka nke ọzọ, Ọ nwekwara ọkwa ka ị ghara ịgbaghara usoro ọnwa na-abịa. Tụkwasị na nke ahụ, ọ na-egosi banyere ịrị elu na nhazi nke ọnwa, ọkụ na ihe ndị ọzọ.
Usoro ọnwa: kalenda ọnwa eklips
Iji mechaa akwụkwọ nchikota a gbasara ngwa ngwa ọnwa kachasị mma maka gam akporo, anyị nwere kalenda ọnwa dị mfe ma dị irè nke na-aga n'isi, na-enweghị mmasị ọzọ, na-egosi ihe usoro ọnwa bụ maka ọnwa ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa usoro ọnwa kacha elu maka gam akporo